ကျမ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျမ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ
ကျမ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ
Posted by Wow on Mar 10, 2012 in Creative Writing | 64 comments
ကျမ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံလိမ်ညာတတ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သွေးသားထဲက ကို ရိုးသားနေတယ် လို့ ထင်နေသူပေါ့။ ကောက်ကျစ်သူတွေကို ဒီလိုကောက်ကျစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ လို့ ဘယ်တော့မှ နားမလည်နိုင်သူပါ။ ယုံကြည်ချက်အတွက် အသက်စွန့်သွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ချေဂွေဗားရား၊ ဒေါက်တာဟိုးဆေးရီဇော်တို့ကို အလွန်လေးစားအားကျ ခြေရာနင်းလိုပေမဲ့ သရဲတော့ အင်မတန် ကြောက်ပါတယ်။ ဂျူံးအော့အတ် တစ်ယောက်ပြင်သစ်အလံကိုကိုင်ဆွဲပြီး တပ်ဦးကချီတက်တိုက်ခိုက်ရလောက်အာင် ယောက်ကျားတွေဘာလုပ်နေကြလဲလို့ တစ်ခါတစ်ရံယောက်ကျားထုတစ်ရပ်လုံးကို သောက်ညင်ကပ် တတ်သူပါ။ (ဘတ်စ် ပေါ်မှာနရာလုထိုင်တဲ့ယောက်ကျားတွေနဲ့တွေ့ရင်ပိုဆိုးပါတယ်)
ဘ၀ရဲ့ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲလို့မေးလာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဇဝေဇ၀ါနဲ့ အဟုတ် အခုအသက်အရွယ်အထိ ငါတော့တစ်နေ့ဘာဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်မတွေးဘူးသေး။ ဒါပေမဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ဟေးလားဝါးလားလုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေ၊ မော်ဒယ်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့ စပွန်စာအိမ်မက်မက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုတော့ အင်မတန်မျက်မုံးကျိုးပါတယ်။
မရှိတာထက်မသိတာခက်ဆိုတာကို လေးလေးနက်နက်ထောက်ခံပြီး လူမှုရေးမသိ၊ ယဉ်ကျေးမှုနားမလည်၊ နိုင်ငံကြီးသားမပီသ၊ ငါ့ဘို့မှ ငါ့ဘို့ တစ်ဘို့ထဲသိတဲ့ “ဖေ့သားကြီး” များကို ပြည်သူ့နီတိ စာအုပ် လိုက်ဝေပေးချင်သူပေါ့။ (အင်း ခေါင်းမှာတော့ တစ်ခုခုဆောင်းသွားမှ)
သူများနောက်ကျောဒါးနဲ့ထိုးရမှာရှက်တတ်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုလို့ကတော့ သတ်ရဲ၊ သေရဲပါတယ်။ ( အမလေး အိမ်မြှောင်ကြီးတော့ အမေရေ လုပ်ပါဦး)
သင်္ခသူသမီးကျောက်စာထဲကလို အမျက်မကြီးသော၊ ခွင့်လွတ်တတ်သော၊ ပေးကမ်းတတ်သော၊ ၀န်မတိုတတ်သော စတဲ့ ဆုတောင်းကိုတောင်းပြီး အရိမေတ္တိယျ ဘုရားရှင်ကိုဖူးမျှော်ချင်သူပါ။ ကိုယ့်ထက်အားနဲသူများကို သနားကြင်နာညှာတာပြီး ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးသူများကိုတော့ မုဒိတာပွားဖို့ မနဲကြိုးစားနေရပါတယ်။ အဆိုပါအင်အားကြီးသူတွေက ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ မသမာသူတွေဖြစ်ရင်တော့ ဘုရားရှိခိုးရင် “ဒင်း မပါ” လို့ ဖယ်ပြီး မေတ္တာပို့တတ်ပါတယ်။
သည်းခံတယ်ဆိုတာ အရှုံးပေးတာမဟုတ်သလို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုံးက အင်္ဂလိပ်တပ်မှုးများရဲ့ “အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာခဲ့သည်” ဆိုတဲ့သဘောထားကို လေးစားစရာတစ်ရပ်အဖြစ် မနိုင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ရပ်ကို အတင်းတိုက်မနေဘဲ အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာပြီး အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ နှုတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်နေတတ်ပါတယ်။ Terminator ထဲမှာ အာနိုးကြီးပြောသွားဖူးတယ်လေ “I will be back.” တဲ့။
မြန်မာပြည်ကိုချစ်လားဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေရင်တော့ မှန်တဲ့ဘက်ကပဲ ၀င်ပါဖြစ်မှာပါ။ လမ်းသွားရင်း ခွေးနှစ်ကောင်ကိုက်တာတောင် အားနဲတဲ့ခွေးဘက်က ၀င်ကိုက် အဲလေ ၀င်ရိုက်တတ်သူမို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်ဒိုကို ဘယ်လောက်ပဲ အသဲစွဲကြိုက်ကြိုက်၊ လူ့မလှိုင်ကြီးများ ထူထောင်ထားတဲ့ MNL ကိုဘယ်လောက်မုံးမုံး၊ ရီးရဲလ် နဲ့ MNL ကန်ရင်တော့ ကျိန်းသေ MNL ဘက်ကခုံတန်းမှာ ထိုင်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။
Virgo ရာသီဖွားဖြစ်လို့ စည်းကမ်းတိကျ၊ လှပ (ဟီ ဟီ့ )၊ သစ္စာရှိ၊ ရိုးသား၊ အချစ်ကို တန်ဖိုးထားပြီး မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကတော့ ဇီဇာကြောင်၊ မကောင်းမြင်တတ်လွန်း၊ အငြိုးအတေးကြီးတဲ့ ရှေးရိုးစွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ် တစ်ဦးပါ။
ဂေဇက်မန်ဘာများစာရင်းမှာ Wow ကို ကျား၊မ မသိလို့ ရေးထားရာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဘာကောင်လဲဟု ပြန်စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပုံပါ…
အဲဒီတော့ ကဲ ကျမ ဘာကောင်လဲဟင်င်င်င်….
has written 62 post in this Website..
View all posts by Wow →
မသိတော့ဘူး သေချာတာကတော့ အေမီလည်း ဘွဲ့ရပြီးရင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးဘူး
ရည်မှန်းချက်က အဆင်ပြေသလိုပေါ့ အေမီရယ်…
Thanks Ma Ma
လွှတ်မိုက်တယ်ဗျာ .. အရေးအသားကတော့ ၉ လောက်ရှိတယ် ..
မိန်းကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သေချာအောင်ပိုစ့်ရေးထားတာ မိုက်သဗျာ ..
ဆက်ရေးဦးဗျ .. ဒါနဲ့စကားမစပ် .. wow ဆိုတော့ .. world of worldcraft ဆော့လို့လား???
မဟုတ်ပါဘူး ပူတူးရယ်။ ဘာနာမယ်ရွေးရမှန်းမသိတာနဲ့ စိတ်ရှုပ်ပြီး exclaim လုပ်တဲ့ အသံကို ထည့်လိုက်တာပါ…
ဟေ့ ဒါမှ မ စစ်စစ်ကွ။
အဲဒီလို ကြွေးကြော်လိုက်ပေါ့ WOW ၇ယ်
အဲလိုပြောလွန်းလို့လဲ လူမုံးများလှပါပီ padonmar ရယ်
WOW = Worth of Wisdom
it’s meaningful, nice….
အမလေး pooch ရယ် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ကိုယ့်နာမည်ကို ဘာမှန်းမသိတာ အခု pooch ပြောမှပဲ အဓိပါယ်ရှိတဲ့ နာမယ်လေးဖြစ်သွားတယ်… ရှက်ရှက် … အာရိဂတ်တောဂိုဇိုင်းမတ်
မိန်းမတွေမှာ.. (ယောက်ျားတွေထက်)အားသာတဲ့.. သဘာဝပေးအထောက်အပံ့ရှိပါတယ်..။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်မပြည့်မှီရင် ပြည့်မှီတဲ့ယောကျာ်းရှာ (သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်) ရလို့တာပါပဲ..။
အဲဒီယောက်ျားက.. ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးရင်ကြီးသလောက်.. အတွေ့အကြုံပညာ အရည်အချင်းတွေ ကော်ပီကက်လည်း လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်..။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလေးစားအားကျရင်.. ဒီခေတ်ထဲ..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုလူစား ရာနှုန်းပြည့်မဟုတ်ဖူးဆိုရင်တောင်… ပြည့်မှီသူတွေရှာယူပေါ့…
အမျိုးသမီးအားလုံး.. စဉ်းစားနိုင်အောင်.. သဘောတရားကိုပြောပြတာပါ…။
သေသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သွားမမျှော်နဲ့… ဗိုလ်ချုပ်ကြောင်ကြီး အသက်ရှင်လျက် အကောင်းပတိ ရှိသေးတယ်…။ ကြီးတာလည်းမမေးနဲ့ ဆူပါဟဲဗီးက အဘခေါ်ရမယ်..။ ဝိုးလေး လိုချင်ရင် ကော်ပီကက်မကလို့ ပိုင်းရိတ်ကက် ကလုန်းကက် အကုန်ကက်နိုင်တယ်…။ ဦးကြောင်ကတော့ တခုပဲကပ်မယ်…(အသဲနှလုံးဂျင်း…. )
ဦးကြောင်က သများပို့စ်မှာ ကြော်ငြာဝင်တာလားဟင်
ဦးကြောင်ရေ Wow က ကက်တော့ကက်ချင်တယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်အမြင်ကတ်တာတဲ့
ရှမ်းပြည်မှာဂျင်းငရုပ်ရှိတယ်အဲဒါလေးနဲ့ကပ် ဦးကြောင်တွက် ပါဆယ်ပို့ပေးလိုက်မယ်။
ကဲဒါဆို ဗိုလ်ချုပ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ စီရော်နယ်ဒိုလို ရုပ်မျိုး ဒဂျီး ရှာပေး… ခုရှာပေး ;)
မဟာရာဇာ အံစာတုံးပါဗျာ …… လို့
ကြီးမိုက်ရယ် မမိုက်နဲ့တော့နော် အိမ်ကို စာအုပ်ပို့လိုက်မယ်
ရွှီး … ဖြောင်း .. ဖြောင်း .. ဖြောင်း ..
လက်ခုပ်တီး၊ လက်ညိုးလေးထောင်၍ အားပေးသွားပါတယ်နော် …
အရေးအသားကို ကျုပ်လည်း ခိုက်သဗျို့ …
အစကတော့ Wow ဆိုတာ ကျားမှန်း၊ မမှန်း မသိလို့ မသိလို့ လို့ပဲ မှတ်ခဲ့တာပါ …
အခုတော့ အတိအလင်းကို သိလိုက်ရပါပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း …….
ခင်တဲ့ … အံစာတုံး
အခုတော့ အတိအလင်း ဘယ်လိုသိလိုက်ထာလဲဟင် ;)
snow htet says:
Sa Luu says:
Nice writing. I really like this post……
ကျေးဇူးပါ Sa Luu နဲ့ Snow Htet ရေ…
ဟွန့် သူကိုယ်တိုင် မသိတော့
ဖြဲမ နင်တို့အဖွဲ့ထဲ အတင်းဆွဲမထဲ့နဲ့နော်
wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ……….. wow……. မိန်းမ ( မှတ်ဥာဏ်မကောင်းလို့ အလွတ်ကျက်သွားပါတယ်)
ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးထင်ပါရဲ့ ။
မှန်ပါဒယ်ကွယ် ဒီနေရာမှာရပ်လိုက်ရင် သဂျီးဆီက ပွိုင့်တွေထုတ်သွားလို့ရပါဒယ်
ကျမ လို့ သုံးပြိးတော့မှ ဘာကောင်လဲဆိုတော့ နဲနဲတော့ ထောက်သွားတယ်………။ စိတ်ထဲက တိုးတိုးလေး ပြန်ပြောမိတယ်……… ” တီကောင်” လို့……… ဘာမှတော့ မပတ်သက်ပါဘူး စိတ်ထဲက သူ့အလိုလိုပေါ်သွားတာ…………။ တစ်ကောင်ထဲ ဒါပေမဲ့လို့ ရှေ့ကလာပြောရင် နောက်က ကြွက်လို့ ပြောသလိုမျိုး သူ့ဖာသူ အော်တိုမစ် ဖစ်သွားတာ………….။ တတ်နိုင်ချေဘူး…..။
ဒါချို wow ကနေ worm လို့ပြောင်းလိုက်ရမှာလား
ကျနော်က ယောက်ျားလေး တယောက်ပါ ..။
ဟဲ့ ပလုပ်တုတ် ငါ့စကားဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့် ..။
ဒီလိုပါ . . မဆိုတော့ မပေါ့နော် …။
ကျားဆိုတော့ .. အင်း… ကျားဖြစ်ရမပေါ့…။
Wow ရေ တကဲ့ ကို Wow ဖြစ်စေတဲ့ Post ပါ။
သကောင့်သား တွေကို ခေသူမဟုတ်ကြောင်းပြလိုက်တာပေါ့။ :-)
“ဂေဇက်မန်ဘာများစာရင်းမှာ Wow ကို ကျား၊မ မသိလို့ ရေးထားရာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဘာကောင်လဲဟု ပြန်စဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပုံပါ…
အဲဒီတော့ ကဲ ကျမ ဘာကောင်လဲဟင်င်င်င်….”
Wow ကို ဝေါင်းလို့အသံထွက်ရင် ကျားဖြစ်နိုင်တယ် ဝိုးလို့တော့အသံမထွက်လိုက်ပါနဲ့
ရှမ်းလိုပြောရင်ဝိုးဆိုတာ ဗမာလိုနွားတဲ့ စတာနော်……..
မမwowအစ်မယောက်ျားယူဖို့စဉ်းစားရင် စီရော်နယ်ဒိုအရပ်နဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းစတိုင် တွန်ခရုလိုအပြုံးမျိုးပိုင်
ရှမ်းပြည်သားက အလုပ်လဲကောင်းကောင်းလုပ်ပါတယ်၊အိမ်မှုကိစ္စများလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းမသား
များအပေါ်မှာလည်း စာနာထောက်ထားတတ်ပါတယ် ၊ လောလောဆယ်တော့ အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်
ရင်း ပိုက်ဆံပြတ်သွားလို့ ဝါယာလက်ချိတ်ခကို ကောင်မလေးတွေဆီမှာပိုက်ဆံလိုက်ချေးရင်း သူတို့နဲ့အတူ
တူဘီယာသွားသောက်နေပါတယ် ကျွန်တော်ကငါးပါးသီလလည်းရမ်းလုံခြုံပါတယ် ငါးပါးသီလမှာ
သူများအသက်မသတ်တဲ့ ပါနာတိပါတကံ၊ ခိုးတတ်သော အာဒိန္နာဒါနာကံ၊ သူတစ်ပါးအိမ်ယာကိုလွန်ကျူးတတ်သော ကာမေသုမိစ္ဆာကံ ၊ အရက်သေစာသောက်စားတတ်သော
သူရာမေရိယကံတွေ အကုန်လုံပြီး မုသာဝဒဆိုတဲ့လိမ်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲကျူးလွန်တတ်ပါတယ်။
ဒါလေးကိုစာနာထောက်ထားပြီးကြည့်ရင်တော့ မမwowအိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကိုဦးစား
(မှတ်ချက်။ ။ မုသာဝါဒဖြင့် ကျန်လေးပါးအားခြုံငုံကြည့်သောအခါတွင်မူ…………… လိမ်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲနော် ရွာသားတို့)
အားပေးသွားပါတယ် Wow ရေ ကျွန်တော်လည်းရွာထဲရောက်မှ ကိုအံစာတုံးတို့၊ ကိုစိန်ပေါက်တို့ ၊ကိုဖရဲတို့နဲ့တွေ့ပြီး ပြောင်တောင်တောင်လိုက်ရေးတတ်နေပြီဗျို့……မှားတာရှိရင် ခွေးလွှတ်တော်မူပါ
စကားမစပ် Wow ရေ ကျွန်တော်ကတကယ်လူပျိုစစ်စစ်နော်ရေမရောဘူး။
ရှမ်းပြည်သားရေ စီရော်နယ်ဒိုအရပ်နဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းစတိုင် ကထားပါ ခရုလိုအပြုံးကတော့ အမလေး အသဲယားလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ဟယ့်ဟယ်….
လိမ်တာကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လေးပါးသီလလုံတယ်ဆိုတော့ လွတ်တော်အမတ်ဝင်ရွေးပါလားဟင်
သများကိုလည်း မမေ့ပါနဲ့ချင့် ….
ရုပ်ရည်ကတော့ ဆံပင်ပုံအလိုက် ပြောင်းလဲတတ်တာမို့
ရှည်ရင် ဒက်(Johney Depp) တိုရင် ဒင်း(James Dean)
လို့အလွယ်မှတ်ထားပြီး မြင်ယောင်ကြည့်ပါချင့် …..
အလုပ်အကိုင်ကတော့ ကမ္ဘာပါတ်ပြီး အိမ်မက်လေးတွေရောင်းပါတယ်ချင့်…
အကျင့်ကတော့ အလုပ်ချိန်ပြင်ပ ဆို အိပ်ချိန်ကလွဲရင် မူးနေတာမို့
ဟုတ်တယ်လေ …မူးနေမှတော့ ဘာ မဟုတ်တာ လုပ်နိုင်ဦးမလဲ…
ဟင် ရှည်ရင် ဒက်ပေါက်ပြီး တိုရင် ဒင်းကြမ်းပြည့်ပီး ပိုဆိုးဒယ်….
နင်ကအားရင် မူးပြီးအိပ်နေတာကိုး ဂီဂီရယ်
“သင်္ခသူသမီးကျောက်စာထဲကလို အမျက်မကြီးသော၊ ခွင့်လွတ်တတ်သော၊ ပေးကမ်းတတ်သော၊ ၀န်မတိုတတ်သော စတဲ့ ဆုတောင်းကိုတောင်းပြီး အရိမေတ္တိယျ ဘုရားရှင်ကိုဖူးမျှော်ချင်သူပါ။ ကိုယ့်ထက်အားနဲသူများကို သနားကြင်နာညှာတာပြီး ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးသူများကိုတော့ မုဒိတာပွားဖို့ မနဲကြိုးစားနေရပါတယ်။ အဆိုပါအင်အားကြီးသူတွေက ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ မသမာသူတွေဖြစ်ရင်တော့ ဘုရားရှိခိုးရင် “ဒင်း မပါ” လို့ ဖယ်ပြီး မေတ္တာပို့တတ်ပါတယ်။”
ကြိုက်သွားပီ “WOW” ရေ…
ကျေးဇူးပါ မွန်ကစ် ရေ
ကြော်ငြာသလိုဖစ်သွားလားဟင် … ဟယ် ချက်ချာဂျီး
WOW = Women to Wife လား ဟင် အဲဒါအမှန်တော် wow က အပျိုကြီးလား အပျိုလေးလား အပျိုလတ်လား.. ဟိဟိဟိဟိ
မိန်းမ ဖြစ်ကြောင်း ကြွားတာ သူတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်.. နဲနဲတော့ သတိထားပေါ့ ရွာထဲက တွေ.မရှောင် လူပြိုးသိုးတွေနဲ. ဆိုတော့လေ.. ဟိဟိဟိ
ဖရဲသီးတို.၊ အံစာတုံးတို.၊ ကိုဂီ တို.၊ ကိုကမ်းကြီးတို.၊ ကိုပေါက်ဖော်တို. သူတို. က ရိုးသားကြိုးစားကြတဲ့သူတွေပါလို… ပြောမလို.ပါ.. ဟိဟိဟိဟိဟိဟိ
ဟောဒမှာ ကိုကိုတိုက်တယောက် လျောက်ပြန်သံပေးလုပ်နေဘာဒယ်ဗျို့….
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် မမ ၀ိုးရေ….
မမ နဲ့ လိုက်အောင် ဂီလည်း နာမည်ပြောင်းမလားလို့…
Mighty Male and Marvelous Myanmar Marketer
Oops! I did it again! ဆိုပီး ဘရစ်တနီလိုပဲ ခလေးနှစ်ယောက်မွေးမလို့လား။ ဟီဟီ့ အားနိုးကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ကားလိုလေ…
အစ်မရေ လေးပေါက်ဖွတာနဲ. ပဲ နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်တော့ဖြစ်တော့မယ်… ရှိပါတယ်.. ပုန်းနေတာ ဟိဟိ
အုပ်ထိန်းသူကြီး ဒီပို.စ်တွေ ဖတ်မိလို.ကတော့..
မင်္ဂလာမဆောင်ရပဲ သူ.အသရေဖျက်ပါတယ်ဆိုပြီး မောင့်ကျက်သရေ ခေါင်းပေါင်းထက် ပတ်တီးပြေးမြင်မိသားဗျာ.. အဟင့် အဟင့်…
သများ နားရွက်ပြန်ဆက်ထားတာ မကြာသေးပါဘူးဆို…
ကျမကို ဘာကြောင့် အနီရောင်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြ
နိုဝီရေ တို့တော့ မဟုတ်ဘူးနော်….
နောက်မှာနောက်မှာ အ၀တ်လျော်တဲ့တုတ်ကြီးကိုင်ပီးလိုက်လာနေဘီ ကိုရွေတိုင်စိုးရေ ပြေး ပြေး …
မမမိန်းမ wow ရေ ကျွန်တော် အုပ်အုပ်က ဘယ်တော့မှ တုတ်မကိုင်ဘူး.. သူ.မှာ လက်ညှိုးနဲ. လက်မရှိရင် အဆင်ပြေတယ်လေ…
ပြောနေရင် နားရွက်နဲ. ဗိုက်ခေါက် က ယားလာပြီး ဟီးဟီးဟီး
မိဖုရားဖွားစောကို အတ်တ ကြီးသူလို့ ခံယူမိထားသူဆိုတော့
သင်္ခသူသမီး ကို နှစ်လိုမိတဲ့ တို့က
သင်္ခသူသမီးလိုစိတ်ဓါတ် ရှိတဲ့ wow ကိုလဲ ခင်မင်လျက်ပါလို့
ဟီးဟီး သိပ်လဲအထင်မကြီးပါနဲ့ နိုဝီရယ် အဲလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့ ကြိုးစားနေဆဲပါ
wow ရေ အရေးအသားလေးကိုတော့ သဘောကျမိတယ်
အကြောင်းအရာကိုတော့သဘောမကျဘူးပေါ့ … နောက်ထှာ
Wow ရေ ပရောက်အော့ဖ် ယူပါ …. ။
မိန်းမတွေကို … တဆင့်နိမ့်လူတန်းစားလို့ အတော်များများက ခံယူထားကြတယ် … မိန်းမတစ်ချို့တစ်လေကလည်း .. အဲ့ဒီအတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ခံထားကြတယ် … ။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး မိန်းမတွေ ဒီလောက် မပိန်းသေးပါဘူး .. .ဥာဏ်ရည်ထက်မြက် သွက်လက်တဲ့ လူတွေ အများကြီး ရှိပါသေးလားဆိုတာ .. သက်သေထူလိုက်တာ … ဘရာကြော်ပါဗျို့ … :cool:
ဟုတ်ပါတယ်အီတုံးရယ် မိန်းမဖြစ်ရတာ ရှက်စရာလို့ ဘယ်တုံးကမှ မခံယူခဲ့ဘူးပါဘူး။ အားပေးတာကို ကျေးဇူးပါ…
အသုံးအနှုံးတွေ ဥပမာ ညွှန်တာလေးတွေ
ဒါလေးတွေကြည့် ပြီး Aunt Wow လို့ ခေါ်ရမယ်ထင်ပါရဲ့..
နွေဦးကကော ယောက်ကျားလား မိန်းမလားဟင်င်င်
ကြုံဆုံလာတဲ့ ကျွန်မ နဲ့ လမ်းမပေါ်
ကြင်နာတာတွေ ကို ရင်ဖွင့်ပြောမယ်လို့ ထင်တယ် ။
အို..ကျွန်မ က စိတ်ဆိုးမယ် ထင်လား..
ကြာရင် သိပ်နောက်ကျလို့ သွားလိမ့်မယ်…
(မှတ်မိသမျှ မခိုင်ကြီး သီချင်းစာသားများကို မန့် လိုက်ပါသည်)